Babelibiza screen umvikeli BodyGuardz HD Anti-ukuxhopha ScreenGuardz (2 izicucu) for BlackBerry 9790 Bold — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Babelibiza screen umvikeli BodyGuardz HD Anti-ukuxhopha ScreenGuardz (2 izicucu) for BlackBerry 9790 Bold
ivikela Akukona nje kuphela isihenqo efonini yakho evela imihuzuko udoti, kodwa futhi ukuvimbela zonke izinhlobo ukukhanya, kuthuthukisa kakhulu ukucaciseleka picture esibukweni bese kwandisa angle wokubuka! Kulula kakhulu ukusebenzisa, slim futhi avulekile. Brand izinga BodyGuardz.
Zokuzivikela Film BodyGuardz HD Anti-ukuxhopha ScreenGuardz wenziwe material esiyingqayizivele, lapho-ke nje kuphela ivikela isikrini kwefoni yakho kusuka imihuzuko udoti, kodwa futhi ukuvimbela zonke izinhlobo ukukhanya, kakhulu ngcono isithombe esengqondweni iyacaca futhi kwandisa angle wokubuka!
Zokuzivikela BodyGuardz film Kulula kakhulu ukusebenzisa: Ngokungafani nezinye films efanayo, awudingi okokuqala ilungelo ukuyifaka esibukweni, uma ngokungalungi unamathisele, uzodinga nje ayikhiphe bese uyazama futhi, ngesikhathi esifanayo akaphelelwa anamathelayo yayo futhi izakhiwo zokuzivikela. Ngaphezu kwalokho, uma uthuli singena inqubo yokufaka, ungakwazi umane uxubha ifilimu ngamanzi!
Le filimu mncane kakhulu, nge ukuthungwa imperceptible, ngakho uyozizwa ukuphepha kwakhe kuphela futhi ngcono izakhiwo, singakunaki lingunina esikrinini!
Isethi bathengisa 2 ifilimu zokuzivikela.
Le filimu senziwa ngqo model BlackBerry 9790 Bold unikezwa izici zayo (okuyinto has usayizi edingekayo, ijamo kanye kude).
Babelibiza screen umvikeli BodyGuardz HD Anti-ukuxhopha ScreenGuardz (2 izicucu) for BlackBerry 9790 Bold, esobala BZ-HBB9-1111 ●